HTC က | | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
ယခုနှစ် OS ကို-STORE ကြီးတွေပြန်အဆုံး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်အဟောင်းဖောက်သည်ကျေးဇူးတင်နိုင်ရန်အတွက်, the company cut prices of HTC7Pro T7576 mobile phone （black）.The event starting today, ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနောက်ဆုံးအနေဖြင့်, ပထမဦးဆုံးအ-တာဝန်ထမ်းဆောင် ... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
ယခုနှစ် OS ကို-STORE ကြီးတွေပြန်အဆုံး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်အဟောင်းဖောက်သည်ကျေးဇူးတင်နိုင်ရန်အတွက်, the company cut prices of some existing HTC processing. အဆိုပါအဖြစ်အပျက်သည်ယနေ့စတင်, ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနောက်ဆုံးအနေဖြင့်, ပထမဦးဆုံးအ-တာဝန်ထမ်းဆောင်အခြေခံ. အကျဉ်းချုပ်: 70% off... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
ဇူလိုင်လ 20, 2014 OS ကိုထုတ်ကုန်များ 0
The style of HTC One M8 is similar as HTC one, but the whole workmanship is more outstanding than before. Let me show you which it enhanced. Exterior 1. larger screen, more metallic HTC One (M8) hasa5-inch capacitive... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
Now all the smartphones pursue smaller lighter thinner.Of course,the HTC One VX is in the row. With the One VX’s smaller screen comesalower resolution. At 960×540 with 245 PPI it starts to show its lower... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
HTC Dream G1 isaphone which made by the carrier t-mobile USA custom, produces by HTC (HTC က) OEM factory. And it is the first in the world using Google Android operating system commercial Mobile phone products. HTC Dream... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 16, 2014 admin ရဲ့ 0
HTC is usingavariety of mobile advertising units to promote its products on mobile sites including Rolling Stone and Billboard. HTC is cutting its operating costs by almostaquarter in order to stave off bad results,... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
နိုဝင်ဘာလ 28, 2013 admin ရဲ့ 0
Here has the top 10 စမတ်ဖုန်းများ, looking for the perfect the gift? Top 1: Apple iphone 5s The iPhone 5s may lookalot like its predecessor. But withafaster new processor,afingerprint sensor, and an improved camera... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
Nokia က စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ စီပီယူ စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု ဥပဒေရေးရာအနက် Software များ Intel က Samsung က HD Graphics processor ​​ကို ပရိုဆက်ဆာ device ကိုမော်ဒယ် HTC က ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု 64-နည်းနည်းက Windows ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် OS ကို-STORE Technology_Internet နည်းပညာ မိုဘိုင်းဖုန်း